Ukuqeqeshwa kwiZikliniki kunye noCetying Psychology
Kubafundi nabazali Phumelela esikolweni
Khetha iNkqubo Efanelekileyo Ngeenjongo Zakho
Abafundi beemfundo eziqeshwe ngokweemfundo abafuna umsebenzi kwiinkqubo zengqondo bahlala becinga ukuba ukuqeqeshwa kwengqondo okanye kwiengqondo zengcebiso kuya kubalungiselela ukuba benze umsebenzi, oko kukuthathwa ngokungqiqweni, kodwa akuzona zonke iinkqubo zobugqirha ezifundisa ngokufanayo. Kukho iintlobo ezininzi zeenkqubo zoogqirha kwizonyango kunye neengcebiso zengqondo, kwaye ngamnye unikeza uqeqesho oluhlukeneyo. Khawuqwalasele oko ufuna ukukwenza ngeqondo lakho-izigulane izilwanyana, usebenze kwimfundo okanye wenze uphando - xa unquma ukuba iyiphi inkqubo efanelekileyo kuwe.
Ukuqwalasela ngokukhetha iiprogram zeeMdudu
Njengoko uqwalasela isicelo kwiinkqubo zekliniki kunye neengcebiso, khumbula izinto ozifunayo. Yintoni othemba ukuyenza ngeqondo lakho? Ngaba ufuna ukusebenzisana nabantu kunye nokusebenza kwengqondo? Ngaba ufuna ukufunda nokuqhuba uphando kwiikholeji okanye kwiyunivesiti? Ngaba ufuna ukuqhuba uphando kwishishini kunye noshishino okanye urhulumente? Ngaba ufuna ukusebenza kumgaqo-nkqubo womphakathi, ukuqhuba nokufaka uphando ekujonganeni neengxaki zoluntu? Azikho zonke iiprogram zengqondo zogqirha ziya kukuqeqesha ngazo zonke ezi zinto. Kukho iintlobo ezintathu zeenkqubo zoogqirha kwizonyango kunye neengcebiso zengqondo kunye nezifundo ezimbini ezahlukeneyo zemfundo .
Imodeli yenzululwazi igxininisa abafundi abaqeqeshelwa uphando. Abafundi bafumana i-Ph.D., ugqirha wefilosofi, eyona nqanaba lophando. Njengazinye i-Science Ph.Ds., iiklinikhi kunye neengcebiso zeengqondo eziqeqeshwe kwiinkqubo zenzululwazi zijolise ekuqhubeni uphando.
Bafunda indlela yokubuza nokuphendula imibuzo ngokuqhuba uphando ngokucwangcisiweyo. Abagqweswa kulo mzekelo bafumana imisebenzi njengabaphandi kunye nabafundi beekholeji. Abafundi kwiinkqubo zenzululwazi abaqeqeshelwa ngokwenza umsebenzi kwaye, ngaphandle kokuba bafune uqeqesho olongezelelweyo emva kokugqitywa kwezifundo, abafanelekanga ukusetyenziswa kweengqondo njengabagqirha.
Umzekelo wezenzululwazi ubizwa ngokuba yiBoulder Model, emva kweNgqungquthela ye-Boulder ye-1949 kwi-Education Graduate kwi-Psychology Clinic apho yayidalwa khona. Iiprogram-zenzululwazi zifundisa abafundi kwisayensi kunye nokusebenza. Abafundi bafumana i-Ph.Ds kwaye bafunde indlela yokuyila nokuqhuba uphando, kodwa bafunda nendlela yokufaka iziphumo zophando kunye nokusebenza njengengqondo. Abagqwesileyo banamathuba emisebenzi kwimfundo kunye nokusebenza. Olunye umsebenzi njengabaphandi kunye nabaprofesa. Abanye basebenza kwizicwangciso zokwenza izinto, ezifana nezibhedlele, izibonelelo zempilo yengqondo, kunye nokusebenza kwangasese. Abanye benza zombini.
Imodeli-mphishophu yezobuchwephesha iphinda ibhekiswe njenge-Vail model, emva kweNgqungquthela ye-Vail ye-1973 yoQeqesho loQeqesho kwi-Psychology, xa yaqala ukuchazwa. Imodeli yeengcali-ngcali yecandelo lobuchwephesha lobuchwephesha eliqeqesha abafundi ukwenzela ukunyanga. Uninzi lwabafundi bafumana i-Psy.D. (ugqirha wezengqondo). Abafundi bafunda ukuba baqonde njani kwaye basebenzise iziphumo zeengcali ukuba zizenze. Baqeqeshwe ukuba babe ngabasebenzisi bokuphanda. Abagqwesileyo baye basebenza kwizicwangciso zesenzo kwizibhedlele, izibonelelo zempilo yengqondo, kunye nezenzo ezizimeleyo.
Utyholwa ngeNyala: Yintoni na ngoku?
Umcebisi weSikolo soMcebisi ngeCandelo loMcebisi: Yintoni eyahlukileyo?
Uzakufuna iindlela ezahlukeneyo zoFundo lweeFundo zeSikolo soMgqibelo kunye neKholeji
Yintoni enokunika umfundi wakho weGreydesi kwixesha leeholide
Ukubhalwa kombhali Ukuvimba ukubhala iSikolo seNgcaciso yeSikolo
Indlela Yokufumana Iingxelo Zakho Zemfundo Ezisemthethweni
Yintoni enokuyilindela ngexesha leNgcaciso yeSikolo soLuntu
Akukaze kufikeleleka: Indlela yokufaka isicelo kwiSikolo seGreydi xa uneminyaka engaphezulu kwama-65
Yintoni i-Ed.D. Degree?
Uyamkelwa kwiSikolo soPhuphiswano lweSikolo - ngoku?
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiikholeji eziphezulu zaseNigeria
Funda nge-Strong Theory kwi-Sociology
Imfazwe Yomphakathi neVirginia
Ukufundwa kweZibhalo kwiVeki yesithathu ye-Advent
I-Kurt Angle Timeline
AbaFrentshi abaziwayo beFransi Kufuneka Uyazi
IYunivesithi yaseBradport Admissions
Ukuhleka kweNyango - IMizekeliso 17:22
Imbali ye-Nylon Stockings
Iingoma ze-Hit Songs
I-Sly & I-Stonestock Performance ye-Woodstock engenakulibaleka
Amalungelo ezilwanyana kunye neNqobo zoVavanyo
Uphando oluLwandle oluManzi: iMbali kunye neNyaniso
I-Biography kunye neProfayili kaMat Hamill
Iingoma ezi-10 eziphezulu zePap - ihlobo ngo-2011
Unokukunceda njani Ukuphelisa i-Veteran Homelessness
Iimvumi: Omnye ufake i-HIV + Igazi kwiPepsi Cola
I-albhamu emihle ye-Jazz yeKrisimesi
Ngaba 'i-Afin Que' idinga i-Subjunctive?
Uluhlu lweeNdidi ezingama-25 zeRedimentary Rock
UMary McLeod uBethune